Maxaa sababay TikTok adeegsigiisa in laga mamnuuco gudaha Hindiya. – Filimside.net
Maxaa sababay TikTok adeegsigiisa in laga mamnuuco gudaha Hindiya.
Dowlada Hindiya ayaa si rasmi ah u mamnuucday adeegsiga aalada TikTok ee muuqaalada kooban lasoo dhigo ayadoo matal la sameenayo waana arin xasaasi ah oo haatan aad looga hadal haayo baraha bulshada.
Shirkadaha Google iyo Apple ayaa ka saareen TikTok bartooda wax laga dagsado.
TikTok waxaa adeegsadaan in ka badan 120-milyan oo qof Hindi ah waxaana u badan dhalinyaro.
Balse dowlada Hindiya waxay u mamnuucday adeegsigiisa inay dhalinta soo dhigaan muuqaalo yar yar oo aan anshax ahaan wanaagsaneyn dhaqanka iyo diimaha Hindiya ka jiraana liddi ku ah.
TikTok sidoo kale waxaa laga mamnuucay adeegsigiisa Bangladesh halka USA horey ganaax lacageed u dul dhigtay kadib markii lagu eedeeyay si sharci daro ah xogaha caruurta in loogu soo bandhigo.
Shirkada ByteDance ee TikTok maamusho lagana leeyahay dalka China waxay sheegtay in TikTok adeegsadaan in ka badan 500-milyan oo qof daafaha caalamka ku kala nool siyaabo kala duwana looga faa’iideesto weliba dhalinta xirfadooda kusoo bandhigaan. (BBC News).
Shirkada ByteDance ayaa markii kowaad gudaha China ka hirgalay adeegsiga TikTok magaca Douyin asigoo wato September 2016 hal sano kadib daafaha caalamka ayaa adeegsigiisa loo fasaxay asigoo wato magaca TikTok waana mid ka mid ah aaladaha dadka adeegsadaan midkiisa ugu mashquulka badan.
Tiktok waxaa laga adeegsadaa in ka badan 150-dal sidoo kalena 75-luqadood ayaa lagu adeegsan karaa shaqo ahaan waxaana la sheegay macaamiisha ku xiran 500 milyan gaarayaan inay sameeyeen 104-milyan oo Download ah sanadii 2018 taasi oo ka dhigtay Application-ka loogu dagsi badan dunida xiligan casriga ah!